ချစ် သက်တမ်း (၂) နှစ် ပြည့် လေးမှာ ဘေဘီမောင် အတွက် ရင်ထဲက ချစ်စကားလေး တွေဆို ခဲ့တဲ့ သားဂန်း – Shwewiki.com
ချစ် သက်တမ်း (၂) နှစ် ပြည့် လေးမှာ ဘေဘီမောင် အတွက် ရင်ထဲက ချစ်စကားလေး တွေဆို ခဲ့တဲ့ သားဂန်း
သီချင်း အေးအေးလေးတွေ သီဆိုပြီး ပရိသတ်အသည်းကို ခြွေယူတတ်တဲ့ သားဂန်း ကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း ဘေဘီမောင်ရဲ့ အသည်းကို ကြည်နူးစရာ ချစ်စကားလေးတွေနဲ့ ခြွေယူလိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ မနဲ့မောင် အတွဲလေးဖြစ်သလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အရမ်းချစ်တတ်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးပါ။
ဒီနေ့လေး ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ချစ်သက်တမ်း (၂) နှစ်ပြည့် နေ့လေးဖြစ်ပြီး သားဂန်းကတော့ ” Happy Anniversary My lovely… သတိတရ ရှိပေးတဲ့ We Love ညီ ညီမလေးတို့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျ… ဒီကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးမှာ သူမရင်ခွင် တစ်ခုကိုပဲ တမ်းတမ်းတတဖက်တွယ် ခဲ့တာ… သူမ ရှိနေရင် ကဣစ္ဆာသယ ပမာ…. ကျတော့ဘဝပြည့်စုံခဲ့တာပါ…. ကျတော့တို့ချစ်ခြင်းမှတ်တိုင်(၂) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလေ” ဆိုပြီး အကြင်နာစကားလေးတွေနဲ့ ချစ် သက်တမ်း(၂) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးသား မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လေး မှာတော့ သူတို့ကိုချစ်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေဆီ ကနေလည်း သတိတရ လာပေးတဲ့ နှစ်ပတ်လည် လက်ဆောင်လေးတွေ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အကြောင်းလည်း မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေတတ်တဲ့ဘေဘီနဲ့ ဘေဘီဆိုးသမျှ အစ်ကို တစ်ယောက်လို သည်းခံပြီးချစ်ပေးတတ်တဲ့ သားဂန်းတို့ အတွဲလေး ကတော့ တကယ်ကို ရွှေလက် တွဲမြဲမယ့် အတွဲလေးပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ.. နှစ်ပတ်လည် နေ့တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ဒီထက်မက တိုးတိုးပြီး ချစ်နိုင်သွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ခဈြ သကျတမျး (၂) နှဈ ပွညျ့ လေးမှာ ဘဘေီမောငျ အတှကျ ရငျထဲက ခဈြစကားလေး တှဆေို ခဲ့တဲ့ သားဂနျး
သီခငျြး အေးအေးလေးတှေ သီဆိုပွီး ပရိသတျအသညျးကို ခွှယေူတတျတဲ့ သားဂနျး ကတော့ ဒီနမှေ့ာလညျး ဘဘေီမောငျရဲ့ အသညျးကို ကွညျနူးစရာ ခဈြစကားလေးတှနေဲ့ ခွှယေူလိုကျပွနျပါပွီ။ သူတို့နှဈဦးကတော့ မနဲ့မောငျ အတှဲလေးဖွဈသလို တဈယောကျကို တဈယောကျအရမျးခဈြတတျလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှအေားကနြရေတဲ့ အနုပညာရှငျစုံတှဲလေးပါ။
ဒီနလေ့ေး ကတော့ သူတို့နှဈယောကျ ရဲ့ခဈြသကျတမျး (၂) နှဈပွညျ့ နလေ့ေးဖွဈပွီး သားဂနျးကတော့ ” Happy Anniversary My lovely… သတိတရ ရှိပေးတဲ့ We Love ညီ ညီမလေးတို့ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျဗြ… ဒီကမ်ဘာကွီး တဈခုလုံးမှာ သူမရငျခှငျ တဈခုကိုပဲ တမျးတမျးတတဖကျတှယျ ခဲ့တာ… သူမ ရှိနရေငျ ကဣစ်ဆာသယ ပမာ…. ကတြော့ဘဝပွညျ့စုံခဲ့တာပါ…. ကတြော့တို့ခဈြခွငျးမှတျတိုငျ(၂) နှဈပွညျ့ခဲ့ပွီလေ” ဆိုပွီး အကွငျနာစကားလေးတှနေဲ့ ခဈြ သကျတမျး(၂) နှဈပွညျ့သှားပွီဖွဈကွောငျး ရေးသား မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ဒီနလေ့ေး မှာတော့ သူတို့ကိုခဈြတဲ့ အမာခံပရိသတျတှဆေီ ကနလေညျး သတိတရ လာပေးတဲ့ နှဈပတျလညျ လကျဆောငျလေးတှေ လကျခံရရှိခဲ့တဲ့ အကွောငျးလညျး မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နတေတျတဲ့ဘဘေီနဲ့ ဘဘေီဆိုးသမြှ အဈကို တဈယောကျလို သညျးခံပွီးခဈြပေးတတျတဲ့ သားဂနျးတို့ အတှဲလေး ကတော့ တကယျကို ရှလေကျ တှဲမွဲမယျ့ အတှဲလေးပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ.. နှဈပတျလညျ နတေို့ငျးကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျပွီး ဒီထကျမက တိုးတိုးပွီး ခဈြနိုငျသှားပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
ဆရာလေး မစိဏ္ဏဝတီ အဖြစ် သာသနာ့ဘောင် ကို ဝင်ရောက် ခဲ့ တဲ့ အဆိုေ တ်ာမိစန္ဒီ
အမြွာညီ အစ်ကိုနှစ်ယောက် အတွက် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး လိုက်တဲ့ သဇင်ထူး မြင့်